Midowga Musharaxiinta oo go’aan 6 qodob ah kasoo saaray dhammaadka mudo xileedka Farmaajo | Xaysimo
Home War Midowga Musharaxiinta oo go’aan 6 qodob ah kasoo saaray dhammaadka mudo xileedka...
Midowga Musharaxiinta oo go’aan 6 qodob ah kasoo saaray dhammaadka mudo xileedka Farmaajo
Markii uu arkay Qodobadda 91aad iyo 96aad ee Dastuurka KMGah in muddada xilhaynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay tahay afar (4) sano oo ka billaabata maalinta xilka loo dhaariyo.
Markii uu arkay in Madaxweynuhu ku fashilmay in uu dalka kahirgeliyo doorasho qof iyo cod ah oo waqtigeeda ku dhacda si waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka Qaranka.
Markii uu arkay in Madaxweynuhu ku fashilmay hirgelintaheshiiskii doorasho ee 17 kii Sebtembar 2020, isla markaasna caqabad ku noqday xal-u-helista tabashooyinka ku gadaaman dhaqangelinta heshiiska.
Markii uu arkay in ay lama huraan tahay in dalka laga badbaadiyofiraaq dastuuri ah sida ku cad Qod. 95aad (1) ee dastuurka KMG ah, kaas oo qeexaya bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka, iyo sii haynta xilkiisa ilaa inta laga soo dooranayo Madaxweyne cusub.
b) Waa in guddoomiyaha Golaha Qaranka uu shir isugu yeero madaxda dawlad Goboleedyada, Guddoomiyayaasha labada Aqalka, wakiillo ka socda Golaha Midowga Murashaxiinta iyo Bulshada Rayadka ah si loo dhamaystiro hirgelinta heshiiskii 17 ka Sebtembar.
c) In si degdeg ah oo aan dib u dhac lahayn loo soo saaro jadwal doorasho oo la meelmariyo muddo cayiman oo la isla oggol yahay.